လုပ်သားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လှိုင်သာယာ စက်ရုံလေးရုံမှ လုပ်သားအချို့ ?? - Yangon Media Group
လုပ်သားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လှိုင်သာယာ စက်ရုံလေးရုံမှ လုပ်သားအချို့ ??
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄
ဥပဒေမဲ့ အလုပ်ထုတ်မှုရပ်တန့်ရေး၊ လုပ်ခ လစာရရှိရေးတို့အပါအဝင် အခွင့် အရေးဆုံးရှုံးမှုများကို လှိုင်သာယာ ရှိ စက်ရုံလေးရုံမှ လုပ်သားအချို့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်၍ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်များနှင့် ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်တို့ရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံနှစ်ရုံနှင့် ဖိနပ်ချုပ်စက် ရုံနှစ်ရုံမှ အလုပ်ထုတ်ခံရသည့် လုပ်သားအချို့နှင့်အလုပ်ရှင် ရှောင်တိမ်းနေသဖြင့် လုပ်ခလစာ မရဘဲ ဒုက္ခရောက်နေရသည့် လုပ်သားများက ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ ဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းလုပ်သားများ၏ အခက် အခဲကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ တို့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးရန်လည်း တောင်းဆိုကြောင်း ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် သည့်လုပ်သားများက ပြောသည်။
”အစ်မတို့ဆိုရင် အစ်မအပါအဝင် စုစုပေါင်းလေးဦးကို ဘာ အကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲ ကြိုတင်လည်း အကြောင်းမကြားဘဲ အလုပ်ထုတ်ခံရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ် တယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ ဒါကို အခု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလုပ် သမားဝန်ကြီးတွေရော အစိုးရကို ရော စာတင်ထားတယ်။ အခုဆို ရင်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ အ လုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အပြင် အခြား စက်ရုံ မှာ အလုပ်ပြန်သွားလျှောက် လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေ ရတယ်”ဟု Myanmar Infochamp ဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်ထုတ် ခံရသည့် အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် မသင်းသင်းအေးက ပြောသည်။
အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲတွင် လုပ် သား ၄၅ဝ ကို လုပ်ခပေးချေခြင်း မရှိဘဲ တိမ်းရှောင်နေသည့် Central Star လုပ်ငန်းရှင်ကြောင့် အလုပ်သမားများ စားဝတ်နေ ရေးအခက်ခဲဖြစ်ရသည့် အခြေအ နေများနှင့် ကြုံနေရကြောင်း ယင်း ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာန သို့တင်ပြထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း ယင်းစက်ရုံမှ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် မခင် မျိုးမျိုးချောက ပြောသည်။ ”အလုပ်သမားတွေကို လုပ် ခရှင်းမပေးဘဲ အလုပ်ရှင်ကရှောင် နေတယ်။ အလုပ်သမား ၄၅ဝ မှာလုပ်ခမရတော့ ဒုက္ခရောက် တာပေါ့။ အဲ့တာကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနကိုတိုင်တော့ တရားစွဲဖို့ ဝန် ကြီးရုံးခွင့်ပြုမိန့်စောင့်ရဦးမယ် တို့ဘာတို့နဲ့ ကျွန်မတို့လုပ်သား တွေမှာ စောင့်လာတာလည်းကြာ ပြီ ဘယ်လောက်ကြာအောင်ထပ် စောင့်ရဦးမလဲမသိတဲ့အခြေအ နေပါ”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြော သည်။
မြစ်ကြီးနား-ကန်ပိုက်တီးလမ်းရှိ ဆဒုံးရေတံခွန်တံတား ထက်ပိုင်းကျိုးကျ၊ လမ်းပိုင်း သွားလာမြှု?
မန္တလေးမြို့ ညအချိန် ဂိုဒေါင်နှစ်လုံး မီးလောင်၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်သုံးဦးဒဏ်ရာရ၊ ငွေကျပ်သိ??
ဝန်ကြီးချုပ် အပါအဝင် ရခိုင်နိုင်ငံရေး ရပ်ဝန်းအတွင်း ခြိမ်းခြောက်ခံရမှု များလာဟုဆို
မန်းအိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်အတွင်း မြို့သစ်ပိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှု များပြားနေပြီး ယခင်လက
ဝန်းရံပြည်သူ အများဆုံးပါဝင်သည့် အမေစု ထောက်ခံ လှည့်လည်ပွဲ အင်အား ၂ဝဝဝ ခန့်ဖြင့် စစ်ကိုင်ြး
ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာ၊ လာအိုတို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ထိုင်းမြောက်ပိုင်းတွင် တောမီးများငြိ??